Vhura sosi kiyi yemafoni nhare | Linux Vakapindwa muropa
Vhura sosi kiyi yemafoni nhare
Diego ChiGerman Gonzalez | | Zvirongwa
Kunyangwe yemutengo wekugadzira kana zvikonzero zvepfungwa, hapana hunyanzvi hwakagadzirwa zvinoshanda kubva pakutanga. Mota idzinza remhando dzekutanga, mamonitor akagadzirwa kubva kumaterevhizheni, uye nhandare dzekutanga dzakateedzera kumisikidzwa kwechiteshi chezvitima. Chii takatotaura, chimiro chakakosha chatakagara nhaka kubva mutapureta iyo, zvakare, yaive yakavakirwa pane zvido zvevaterevhizheni.
Ndicho chikonzero nharembozha dzichine keyboard chaiyo ine dhizaini yeQWERTY kunyangwe isina kugadzikana sei kushandisa gumi-zvigunwe chirongwa nezvigunwe zviviri. Ehezve, ivo Android uye iOS vabatsiri vezwi havana kukwana zvakakwana kuti vabvise iyo keyboard. Nekudaro, kune vanhu vari kushanda pane dzimwe nzira.
1 Vhura sosi kiyi yemafoni nhare
1.3 BeHe Keyboard
2 Zvikumbiro zvinoenderana
2.1 Bhuruu Line Console
AnySoftKeyboard Iyo ndeimwe yemamwe mabhatani eApple ane mamwe mabasa aripo. Pamusoro pekushandisirwa nemitauro inodarika makumi matatu, inosanganisira yekufungidzira keyboard mabasa (ini handizive kana iri bhonasi), pamwe netsika duramazwi uye izwi rekuisa.
Iyo keyboard inogona kuve yakagadzirirwa neakawanda madingindira uye ese mativi eiyo interface anogadziriswa. Hazvidi kubatana kweInternet uye mvumo yekuverenga mazita uye kuverenga nekuchengetedza mune yekuchengetera kwekunze zvinosarudzika.
Inowanikwa for Android
CompassKeyboard inomiririra iyo-skrini keyboard neimwe nzira. Panzvimbo pekuratidzira mhando dzakasiyana dzezvinyorwa pamapeji akawanda, makiyi ese anowanikwa mune imwe. Uchishandisa masaini uye swipes zvinokwanisika kuchinja pakati peakashongedzwa uye akakosha mavara.
Sezvo iine yakakwira yekudzidzira curve, zvinotora nguva yakareba kuti inyatso. Zvisinei, zvakakosha kune avo vanonyora mumitauro yakawanda vane mavara akasarudzika.
Iyi purojekiti haichawanikwe paGoogle Play.
Uku kutsiviwa kweiyo desktop yeGoogle inoitirwa programmers avo vanoda kuve neruzivo rwakafanana sezvinobvira neyavo PC yekhibhodi.. Inotora iyo QWERTY dhizaini asi inowedzera museve makiyi uye peji reakasarudzika programmer makiyi ane akajairika mavara anoshandiswa kugadzira maapplication.
Yakagadzirwa ichishandisa Dhizaini Dhizaini, iyo inobvumidza maitiro uye ine sarudzo yemisoro inosanganisira yakasviba imwe.
OpenBoard yakavakirwa pane iyo keyboard yeiyo Android Open Source Project inova yakavhurika sosi yeprojekti uye isina chero chemidziyo yezvinhu yeGoogle. Iyi ndiyo yakapusa nzira uye haisanganisi maficha mazhinji kunze kwekugadzirisa girama, kushandiswa kwema emojis uye kuisirwa madingindira.
Inowanikwa kuna Androd
Ose ari muchitoro chepamutemo cheGoogle chikumbiro uye muF-Droid pane mashandisiro ayo pasina kuve makhibhodi anotendera kuwedzera kana kufambisa mashandisiro avo. Ngatitarisei akati wandei acho.
Bhuruu Line Console
Blue Line Console inokutendera kuti utange kunyorera uye kuvhura enjini dzekutsvaga nekutaipa pane iyo keyboard. Iwe chete unofanirwa kunyora maviri kana matatu mavara, kuti uone rondedzero yesarudzo dziripo.
Imwe yesarudzo dzinotevera inogona kuiswa kuti utsvage kunyorera kana kuraira.
Chikamu chezita rekushandisa (semuenzaniso, Blue Line Console)
Chikamu chezita repakeji (semuenzaniso, net.nhiroki.bluelineconsole)
Kukarukureta fomula (semuenzaniso, 2 + 3 * 5)
Mumwe wemirairo yakatsigirwa (semuenzaniso, rubatsiro)
Kana pasina imwe yakavhurwa sosi kiyibodi yefoni yako inokugonesa, iyi application inokutendera kuti ushandise iyo yekombuta yako. Iwe unongofanirwa kuve nechokwadi chekuti ese ari maviri makomputa akabatana kune imwechete komputa uye kuti bhurawuza rinonongedza kune webhu inoratidzwa nechishandiso.
Ramba uchifunga kuti iwe unofanirwa kuzadzisa zvinotevera zvinodiwa.
Iva nekuwana kwakazara kune network.
Ipa mvumo yekudzivirira komputa kupinda muhope mode pasina mvumo kubva kunyorera.
Bvumira timu kuti itarise hunhu uye chimiro chefoni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Vhura sosi kiyi yemafoni nhare
Sigstore, cryptographic kodhi yekuongorora sevhisi kubva kuRed Hat neGoogle
Ivo vanokumbira kugadzirisa Debian kuti ishandise iyo Rust kuitiswa kweiyo coreutils